Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato cod bixinta, ha ahaato goobta codbixinta ama guriga! - Cuntooyinka giraangiraha
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan codeynta, doorashooyinka ama guriga!
Maalinta doorashadu waa soo dhowdahay sannadkanna waa muhiim sidii horeba in loo baxo doorashada iyo codbixinta. Dad badan inkasta oo, helitaanka codbixintu waxay noqon kartaa mid aad u adag runtiina waa hawl weyn. Nasiib wanaag waxaa jira fursado iyo habab badan oo lagu codeeyo taas oo ka dhigaysa mid u fudud qof walba. Hoos waxaa ku yaal liistada waxyaabaha rajeynaya inay ka jawaabaan wixii su'aalo ah ee aad ka qabto wax ku saabsan meel fog oo laga codeeyo oo aaney jir ahaan u aadi karin doorashooyinka maalinta doorashada, iyo guud ahaan codeynta.
Si aad uga codbixiso gobolka Minnesota waa inaad:
Noqo Muwaadin Mareykan ah
Noqo 18 jir illaa Nofeembar 8th
Ku noolow Cinwaanka Minnesota ugu dambayn 19-ka Oktoobar
Uma adeegin qayb ka mid ah xukun dembiyeed culus, oo ay ku jiraan wax tijaabo ah, sii-dayn sharafeed, ama xaalado kale sida soo celinta
In aan hadda lagu xukumin karti-darro maxkamad
Sida Loo Diiwaangaliyo Codbixinta
Si ay u isdiiwaangeli si aad uga codeyso khadka tooska ah waa inaad leedahay:
- cinwaan emayl
-mid ka mid ah kuwan soo socda: Liisanka darawalnimada ee Minnesota, Kaarka Aqoonsiga Gobolka Minnesota, 4 lambar ee ugu dambeeya lambarkaaga Lambarka Bulshada
Diiwaangelinta khadka tooska ah waa sahlan tahay oo waa in la sameeyaa kahor Oktoobar 18.
Ku soo dirista diiwaangelinta sidoo kale waa ikhtiyaar aad u fudud. Si aad u hesho arjiga diiwaangelinta waad heli kartaa daabac, ama la xiriir kanaga xafiiska doorashada degmada mid laguu soo diro. Ka dib u dir arjigaaga diiwaangelinta cinwaankan:
Xoghayaha Arimaha Dibada
60 Boqortooyada Wadista
Haddii aad jeceshahay inaad isqorto shaqsi ahaan waad awoodaa daabac foomka ama ka soo qaado foomkaaga xafiiska doorashada degmada. Ka dib markaad buuxiso foomka waxaad u geyn kartaa xafiiska doorashada degmada ama cinwaankan:
Haddii aad doorbideyso inaad isdiiwaangeliso Maalinta Doorashada waxaad la imaan kartaa arjigaaga diiwaangelinta iyo sidoo kale caddeyn deganaansho. Liistada Aqoonsiga Sawirka la ansixiyay iyo dukumiintiyada ayaa laga heli karaa halkan.
Haddii aad awoodid inaad timaadid codbixinta Maalinta Doorashada waxaad ogaan kartaa halka aad aadi lahayd halkan, oo ku saleysan cinwaankaaga hadda.
Haddii aadan awoodin inaad tagto goobta codbixinta Maalinta Doorashada sabab kasta ha noqotee, waad tuuri kartaa warqadda cod-bixinta 'Absentee'. Marka hore waa inaad buuxisaa Maqnaanshaha arjiga codbixinta - calaamadee sanduuqa "doorashada guud" - ama boostada, fakiska, ama emayl ugu dir arjigaaga xafiiska doorashada degmada markay tahay Nofeembar 7th. Ka dib markii aad ku hesho warqaddaada codbixinta boostada, raac tilmaamaha si aad u buuxiso, uguna dir warqaddaada cod-bixinta cinwaanka ku yaal baqshadda soo-celinta si loo helo ugu dambayn 8-da fiidnimo. Nofeembar 8th. Waad hubin kartaa xaaladda warqaddaada cod-bixinta ee Maqnaanshaha halkan. Codbixinta maqnaanshaha waxay bilaabmaysaa Sebtember 23-deeda waxayna socotaa illaa Nofeembar 7-da
Maxaa ku jira Codbixinta sanadkan?
Wax Ka Beddelka Dastuurka
Caddaaladda Maxkamadda Sare ee Gobolka
Garsooraha Maxkamadda Racfaanka Gobolka
Garsooraha Maxkamadda Degmadda
Qaar ka mid ah cod bixiyaasha Gobolka ayaa sidoo kale u codeyn doona: Gudoomiyaha Degmada, Ciidda & Kormeeraha Biyaha, Saraakiisha Magaalada, Xubnaha Guddiga Dugsiga, Saraakiisha Township, Xubinta Guddiga Degmada, Xubinta Guddiga Degmada, iyo su'aalaha codeynta ee Deegaanka.
Minnesota waxay taariikh ku leedahay inay soo xaadiraan codbixiyayaal aad u tiro badan. Doorashooyinkii guud ee 2008, 2010, iyo 2012 Minnesota waxay ahayd wadanka ugu codbixinta badnaa wadanka oo dhan. Sanadkii 2014 si kastaba ha ahaatee, waxaan hoos ugu dhicin kaalinta 6aad ee dalka. Aan sameyno wax walba oo aan kari karno si aan Minnesota dib ugu soo celino halka ugu sareysa inta lagu jiro doorashadan.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan waxyaabaha looga hadlay boggan, ama guud ahaan codbixinta, la xiriir Xoghayaha Gobolka ee Minnesota 651.215.1440, ama tag boggooda internetka dhammaan waxyaabaha la xiriira doorashada iyo codbixinta.
Sebtember 28, 2016